VidCutter: cheka uye unama mavhidhiyo mavhidhiyo zviri nyore muGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yekushandisa interface iyo VidCutter inopa inogadziriswa nemushandisi, saka iwe unogona kushandisa akasiyana ekuona madingindira uye hombe nhamba yezvirongwa kugadzirisa maturusi aripo uye vhidhiyo yekugadzirisa nharaunda, kuchinjika kune yako kuravira uye zvaunoda Shanduko hadzidi mamwe marongero kuti ashande, saka ruzivo rwevashandisi rwunozoita sekubudirira uye nyore sezvinobvira. Uchazongomaka kutanga kwevhidhiyo mubhawa yenguva uyezve kumagumo kuicheka nekuichengeta ...
Uye zvakare, iwe unogona zvakare kucheka akacheka mavhidhiyo evhidhiyo, uchiita kuti nziyo dzako dzive nyore uye nekukurumidza, kunyangwe kurongedzazve iwo clip kune edu kufarira. Kucheka kwacho kuchange kuri kwekutenda tekinoroji inonzi SmartCut yekuvandudza izvo zvataurwa. Pakati pekushanda kwayo tinowonawo kuti injini yayo yekutamba inobvumidza iwe kuona mhedzisiro, nekuda kweiyo hardware yekumhanyisa system inoenderana ne libmpv raibhurari uye vhidhiyo kugadzirisa inotsigirwa pamusoro peOpenGL. Kana zviri zvekuburitsa vhidhiyo, inowanzo bvumidza iwe kusevha iyo vhidhiyo mune imwecheteyo fomati sosi yayo.
Zvese izvi mune software izvo open sosi uye yemahara, uye kuti iwe unogona kuwana kodhi yayo mu GitHub kana iwe uchida kutarisa kana dhawunirodha zvakananga kubva pawebhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » VidCutter: cheka uye unama mavhidhiyo mavhidhiyo zviri nyore muGNU / Linux
Mhoroi, ini handina kunyatsonzwisisa zvekucheka zvidimbu zvevhidhiyo. Ini ndinonzwisisa kuti mavambo ezvaunoda kucheka anoiswa mucherechedzo, magumo ezvaunoda kucheka anomakwa. Dhinda / sarudza «cheka / bvisa».
Ini handisi kuwana maitiro ekuzviita.
Wepamusoro 8 Debian-based Distros